स्काउट लिडर राजिब खत्रीको ‘स्कार्फ’ सार्वजनिक « Lokpath
२०७७, १६ पुष बिहीवार १२:३०
स्काउट लिडर राजिब खत्रीको ‘स्कार्फ’ सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : २०७७, १६ पुष बिहीवार १२:३०
काठमाडौं । डायनामिक स्काउट क्र्यूको चौथो वार्षिक उत्सवको अवसरमा पत्रकार एवम् स्काउट लिडर राजिब खत्रीको स्कार्फ नामक नियात्रा संङग्रह विमोचन गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल तथा साहित्यकारहरु राधेश्याम लेकाली, युवराज नयाँघरे, लाइन्स क्लबका गभर्नर टंक श्रेष्ठ, स्काउट लिडरहरु डा रविन्द्र प्रसाद पाण्डे, रविन दाहाल, अनन्तप्रसाद भेटुवाल, चन्दन कौसिक लगायतको उपस्थितिमा विमोचन गरिएको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तामाङले खेलकुद र युवा उत्थानका लागि आफ्नो प्रयास सुरु हुने बताएका छन्। राजनीतिक संकटका बेला आफूले जिम्मेवारी पाएको बताउँदै खेलकूद र युवाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आफू सक्रिय बन्ने उल्लेख गरे । उनले स्काउटमा देखिएका समस्या समाधान गर्दैै नेपाल स्काउटको विकासमा योगदान पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले स्काउटले मानवलाई नै अनुशासनमा राख्ने उल्लेख गरे । खत्रीको पुस्तकमा स्काउटसंगै देश, भाषा, संस्कृत र विभिन्न समाजलाई जिवन्त पढ्न सकिने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष लेकालीले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै यात्रा साहित्य अहिले सबैभन्दा पढिने विधा भएको हुँदा यो कृतिले नेपाली पर्यटनका धेरै नदेखिने पक्ष समेटेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यो विशेष कृतिका रुपमा जान सक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
स्काउट लिडर रविन्द्र प्रसाद पाण्डेले स्काउटिङ भित्रको तथ्यपरक चिरफार गरेको भन्दै स्काउटिङको क्षेत्रमा यो कृति कोषेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्का स्काउट लिडर अनन्त प्रसाद भेटुवालले स्काउटिङ इतिहासकै संकटको मोडमा पुगेको बताए। गलत नेतृत्वका कारण स्काउटमा राजनीति हावी भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
बालबालिकालाई उपयोगी ‘बेलबहादुरसँग बिहे’ बजारमा
काठमाडौँ- साहित्यकार जितेन्द्र रसिकको बालचित्र कथा ‘बेलबहादुरसँग बिहे’ बजारमा आएको छ । नेवार
काठमाडौं । वरिष्ठ साहित्यकार तथा पत्रकार विजय चालिसेका तीन नयाँ कृति बजारमा आएका
‘काठमाडौं-पेरिस-काठमाडौं-रेल–बस यात्रा’ बजारमा
काठमाडौं । पर्यटन उद्यमी एवं नेपाल–फ्रान्स उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्याममोहन श्रेष्ठको आत्मवृत्तान्त
साझा प्रकाशनमा पहिलोपटक निर्वाचन, कुन पदमा को निर्वाचित ?
काठमाडौँ– साझा प्रकाशनको २४औँ साधारणसभा अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा डा. विजय
किसानसँग जहिल्यै उधारो सम्झौता, अवधि सकिँदासम्म सवा १९ करोड भुक्तानी…
प्रतिनिधिसभा विघटन: ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार थिएन’